Nahoana no sarotra kokoa noho ny eritreretinao ny teny Sinoa
Ary nahoana no tsy zava-dehibe izany
Ny teny sinoa mandarin matetika dia fiteny sarotra, indraindray iray amin'ireo sarotra indrindra. Tsy sarotra ny mahazo izany. Misy karazany an'arivony sy tononkalo hafahafa! Azo antoka fa tsy ho vita ny hianatra amin'ny olon-dehibe olon-dehibe!
Azonao atao ny mianatra Sinoa mandarinina
Mazava ho azy izany. Mazava ho azy, raha mikasa hametra-pahaizana ambony ianao, dia haka fotoana, saingy nahita mpianatra maro izay nianatra nandritra ny volana vitsivitsy aho (na dia nazoto be aza), ary afaka nifampiresaka tamim-pahamalinana tamin'ny teny Mandariny avy eo fotoana.
Tohizo ny tetikasa toy izany mandritra ny herintaona ary mety hahatratra izay mety ho antsoin'ny ankamaroan'ny olona.
Raha te-hamporisihina bebe kokoa sy ny antony mahatonga ny Sinoa mora hianatra ianao dia tokony hajanonao ny famakiana ity lahatsoratra ity avy hatrany ary jereo ny iray amin'izany:
Nahoana no mora kokoa noho ny eritreretinao ny Mandarin Mandarin?
Tena mafy tokoa ny Shinoa
Midika ve izany fa hafahafa ny rivotra rehetra amin'ny resaka Sinoa? Tsia, tsy izany. Na dia nahatratra adihevitra mendrika nandritra ny 100 andro aza ny mpianatra ao amin'ny lahatsoratra mifandraika etsy ambony (niteny tamin'ny olona akaiky ny faran'ny tetikasany aho), nilaza izy fa ny tenany ihany no nahatratra ny haavony tamin'ny teny Espaniôla dia herinandro vitsivitsy monja .
Ny fomba iray hafa hijerena izany dia ny hoe tsy sarotra kokoa ny Shinoa isaky ny dingana tokony horaisinao, fa maro be ny dingana noho ny amin'ny fiteny hafa, indrindra raha oharina amin'ny fiteny akaiky anao. Nanoratra bebe kokoa momba izany fomba fijeriko sarotra izany aho noho ny fananana vondrona sy horonan-tsarimihetsika eto.
Fa nahoana? Inona no mahatonga izany ho sarotra? ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanasongadiko ny antony sasany mahatonga ny fianarana Shinoa ho sarotra kokoa noho ny fianarana fiteny Eoropeana. Alohan'ny hanaovana izany anefa, dia mila mamaly fanontaniana vitsivitsy isika:
Sarotra ho an'iza?
Ny zavatra voalohany tokony ho tsotsotra dia sarotra ho an'iza?
Tsy misy dikany ny milaza ny fahasarotana tahaka izany sy ny fiteny toy izany dia ny mianatra raha ampitahaina amin'ny fiteny hafa raha tsy voafaritra mazava tsara hoe iza ilay mpianatra. Ny anton'izany dia tsy sarotra takarina. Ny ankamaroan'ny fotoana laniana amin'ny fianarana fiteny vaovao dia ampiasaina hanitarana ny voambolana, ny fampiasana ny fitsipi-pitenenana, ny famolavolana ny fanononana sy ny sisa. Raha mandalina fiteny izay akaiky anao manokana ianao, dia ho mora kokoa ny asa.
Ohatra, ny Anglisy dia mizara teny vitsivitsy amin'ny fiteny Eoropeana hafa, indrindra ny Frantsay. Raha ampitahao amin'ny fiteny hafa izay mbola mifanakaiky kokoa, toy ny Italiana sy Espaniôla na Soedoà ary Alemana, dia be dia be ny sisin-dàlana.
Ny fiteny nahaterahako dia Swedish ary na dia mbola tsy nianatra teny alemà aza aho na tamin'ny fomba ofisialy na tamin'ny fomba tsy ara-dalàna, dia mbola azoko ihany ny dikan'ny teny alemà tsotra sy voasoratra ary matetika mahafantatra ny ampahany amin'ny tenim-paritra alemà raha toa miadana sy mazava. Izany dia raha tsy nianatra ny fiteny mihitsy aza!
Ny tena tombony lehibe dia tsy mazava ho an'ny ankamaroan'ny olona izany raha tsy hianatra fiteny iray izay tsy misy na oviana na oviana overslap amin'ny tenin-dreninao. Ny Mandarin Chinese dia ohatra tsara amin'izany. Tsy misy fifampiraharahana amin'ny voambolana Anglisy.
Izany dia amin'ny voalohany, satria ny teny iraisana amin'ny fiteny mifandraika dia indraindray hafa ihany, saingy manampy izany.
Rehefa tonga any amin'ny sehatra avo lenta ianao ary mbola tsy misy fifandonana eo amin'ny teninao sy Mandarin, dia lasa olana ny hevi-teny vitsivitsy. Miresaka teny amina teny an'arivony isika mba tsy hianatra afa-tsy ny olon-drehetra, fa tsy miova kely fotsiny avy amin'ny fitenin-drazantsika.
Raha ny zava-drehetra dia tsy sarotra amiko ny mianatra teny misongadina amin'ny teny Anglisy:
Super nova Mipoaka
Faharetan'ny Epilepsy Epilepsipatient
Ny sasany amin'ireo dia tena lojika amin'ny teny Shinoa ary amin'ny heviny, ny fianarana azy amin'ny teny sinoa dia mora kokoa raha toa ka vita amin'ny scratch raha oharina amin'ny Anglisy na Soedoà. Na izany aza, dia somary mahatsiaro ilay hevitra. Efa mahafantatra ireo teny amin'ny teny soedoà aho, hany ka mora amin'ny fianarana azy ireo amin'ny teny Anglisy.
Na dia fantatro fotsiny tamin'ny fiteny iray aza izy ireo, dia afaka nahatakatra azy ireo tamin'ny fomba hafa aho. Indraindray aho dia afaka milaza azy ireo. Ny fahatsiarovan-tena indraindray dia manao ny fanitsakitsahana!
Tsy hanao ny fanilikilihana amin'ny teny Shinoa mihitsy izy io.
Noho izany, ho an'ny tanjona amin'ity fifanakalozan-kevitra ity, andeha isika hiresaka momba ny fahasarotan'ny Shinoa ho an'ny mpandahateny amin'ny teny Anglisy, izay mety na mety tsy nianatra fiteny iray hafa, toy ny Frantsay na Espaniola. Ny toe-draharaha dia ho toy izany ho an'ny olona any Eorôpa izay nianatra teny anglisy noho ny tenin-dreniny.
Inona no dikan'ny hoe "mandalina Mandarin"? Fifandraisana mivantana? Fomba fiteny
Mila miresaka momba ny dikan'ny hoe "Learn Mandarin" isika. Midika ve ny ambaratonga ahafahanao mangataka torolàlana, tapakilam-pifamoivoizana ary handinihana ny lohahevitra andavanandro amin'ny mpitoraka blaogy any Shina? Moa ve ato anatintsika ny famakian-teny sy ny fanoratana, ary raha misy izany, moa ve misy soratra voasoritra? Sa ve isika midika hoe karazana fahaiza-manao na teratany nahavita fianarana, na angamba mitovy amin'ny Anglisy?
Ao amin'ny lahatsoratra hafa dia miresaka aho hoe maninona ny fianarana Shinoa dia tsy sarotra loatra raha mikendry fototra iray amin'ny fiteny miteny. Mba hikirakira ny vola madinika eto, dia hijery kokoa ny fahaiza-misaina aho ary hampiditra ny fiteny voasoratra. Ny sasantsasany amin'ireo hevitra ireo dia manan-danja ihany koa ho an'ny mpandahateny sy ny teny miteny, mazava ho azy:
Karazam-bolo sy teny - Aza mino olona milaza fa mila litera 2000 ianao mba hahay literatiora amin'ny teny sinoa, ao anatin'izany ireo fanambarana tena maneso izay azonao vakiana amin'ny ankamaroan'ny lahatsoratra. Amin'ny litera 2000 dia tsy ho afaka hamaky na inona na inona nosoratana ho an'ny mpandaha-teny natokana ho an'ny olon-dehibe ianao. Asio ny isa ary manakaiky kokoa. Na izany aza, tsy ampy ny fahalalana ireo karazan'olona, ​​mila mahafantatra ireo teny entin'izy ireo sy ny fitsipi-pitenenana izay manara-maso ny filaharany. Tsy mora ny mianatra 4000 characters! Eo am-piandohana, mety hieritreritra ianao fa sarotra ny fianarana, nefa rehefa nianatra an'arivony ianao, nitazona azy ireo samirery, nahafantatra ny fomba fampiasana azy ireo sy ny fahatsiarovana ny fomba hanoratana ny lohahevitra dia lasa olana tena izy (anisan'izany ireo mpandaha-teny vahiny tokony holazaiko ). Ny fianarana manoratra dia mitaky mihoatra lavitra noho ny fianarana hanoratra fiteny tahaka ny frantsay.
Miresaka sy manoratra - Raha toa ka tsy ampy ny fianarana olona an'arivony, dia mila mahafantatra ny fomba hitenenana azy ireo ianao, izay mifamatotra amin'ny endriny na amin'ny endriny fotsiny amin'ny fomba nanoratana azy. Raha afaka miteny ny Espaniola ianao amin'ny maha-miteny azy amin'ny teny Anglisy, dia azonao atao ihany koa ny manoratra azy io, farafaharatsiny raha mianatra fivoriambe sasantsasany. Tsy toy izany amin'ny teny sinoa. Ny fahafantaranao ny fomba hilazàna zavatra iray dia milaza anao kely momba ny fomba nanoratana azy sy ny mifamadika amin'izany. Tsy marina ny hoe tsy fahitalavitra mihitsy ny Sinoa , na izany aza, ary azonao ampiasaina izany, saingy mbola manjary mihamafy hatrany ny fianarana.
Tsy misy maimaim-poana - efa nosoratana mikasika ity etsy ambony ity. Raha tsy nianatra tamin'ny fiteny Sinoa na fiteny hafa tsy misy ifandraisany amin'ny anao manokana ianao, dia tsy fantatrao ny habetsahanao maimaim-poana rehefa mianatra teny mifandray akaiky ianao. Mazava ho azy fa sarotra be ny manombantombana, fa aleo lazaina fotsiny fa misy fifandonana goavana eo amin'ny akademika, medikaly amin'ny teny teknika amin'ny teny Eoropeana. Tsy maintsy mianatra izany rehetra izany ianao amin'ny teny sinoa.
Ny fiovan'ny fiteny - ny Sinoa dia manana dialectale maromaro ary misy olona maherin'ny arivo tapitrisa no miteny amin'ny faritra midadasika. Ny teny mandarin dia ny fitenim-paritra, saingy misy fiovana maro ao anatin'io fiteny io, ny faritra ary ny hafa. Tsy fahita firy ny teny marobe amin'ny zavatra iray (jereo ny teny hoe "Alahady" ohatra). Manana fahasamihafana goavana eo amin'ny voambolana ara-pôlitika sy teny samihafa ihany koa isika. Avy eo isika manana Shinoa malaza, izay toy ny fiteny iray amin'ny fiteny izay matetika miresaka amin'ny Shinoa ankehitriny. Na dia mifantoka amin'ny Mandarinina maoderina aza ianao, dia manelingelina sy mampifangaro zavatra ho anao ireo karazana hafa rehetra ireo.
Fampahalalana sy feo - Raha toa ka miala mora kokoa ny famoahana fototra raha toa ka manana mpampianatra marina ianao ary mandany ny fotoana ilaina, dia tena sarotra ny manazatra ny tonony ho an'ny ankamaroan'ny mpianatra. Ao an-tokantrano, eny; amin'ny teny, eny; saingy amin'ny kabary voajanahary tsy misaina loatra momba izany, tsia. Tena sarotra ny mahatsapa ny fahasamihafana misy eo amin'ny silamo milaza amin'ny voalohandohany sy farany saingy amin'ny feo hafa. Raha tsy hoe tena talenta be ianao, dia mety hitazona fahadisoana hafa mandritra ny androm-piainanao. Rehefa afaka kelikely, dia tsy hanakorontana ny fifandraisana izy ireo, saingy mandany fotoana izany ary ny ankamaroan'ny mpianatra tsy tonga any.
Ny fihainoana sy ny famakiana - Ao amin'ny lahatsoratra momba ny antony mahatonga ny Shinoa ho mora hiana-javatra, dia nitanisa zavatra maromaro aho, izay mahatonga azy io ho mora kokoa ny miresaka, toy ny tsy fandikàna matoanteny, tsy lahy sy vavy, tsy misy daty sy ny sisa. Na izany aza, mbola misy hatrany ity fampahalalana ity rehefa mifampiresaka ianao, fa tsy voatanisa ao amin'ny fiteny voasoratra fotsiny. Ny teny sy ny feo dia mitovy. Midika izany fa mora kokoa ny miteny, satria tsy mila manadino be loatra ianao, fa mihaino sy mamaky mafy kokoa satria tsy misy fampahalalana vitsivitsy ary mila mandalina kokoa ny tenanao. Avy amin'ny teny Shinoa no fiteny mitoka-monina. Ny fihainoana dia sarotra kokoa noho ny fandrenesana ny ankamaroan'ny feo amin'ny teny Mandariny , anisan'izany ny tononkalo, izay mahatonga azy ireo ho mora ny mametraka ny zavatra ary ny isan'ny homophones na ny teny homophones (teny mitovy na mitovy) dia tena lehibe tokoa raha oharina amin'ny teny Anglisy.
Kolontsaina sy fisainana - Ny iray amin'ireo sakana lehibe amin'ny fanatratrarana ny teratany vahiny amin'ny teny Shinoa dia ny habetsaky ny kolontsaina tsy fantatrao. Raha mandalina ny teny Frantsay ianao dia mizara ny ankamaroan'ny tantara ara-kolotsaina sy ny fahalalana momba an'izao tontolo izao amin'ny mpandaha-teny, ary na dia mila mameno ny banga izay misy an'i Frantsa aza ianao dia ny rafitra ankapobeny dia mitovy. Raha manomboka mianatra teny sinoa ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala na inona na inona momba ny tontolo miteny Shinoa. Azonareo alaina sary an-tsaina ve hoe firy ny adidin'ny olon-dehibe hahalala ny zava-drehetra momba an'izao tontolo izao izay fantatrao dieny izao sy an-taonany izao, mianatra any amin'ny firenena, mamaky gazety, boky sy ny sisa? Ankoatra izany, ny toe-tsainy na ny toe-tsainy dia matetika tsy mitovy. Ny hatsikana dia tsy manao toy izany foana, ny hevitry ny olona sinoa iray dia ny lojika dia mety tsy ho lojika aminao, ny soatoavina ara-kolontsaina, ny fitsipika sy ny fombafomba dia samy hafa. Sy ny sisa. Raha te-hamaky bebe kokoa momba ny fahasamihafan'ny kolontsaina sy ny toe-tsaina ianao, dia manolotra boky iray antsoina hoe The Geography of Thought aho .
Tena zava-dehibe ve ny maha sarotra azy io?
Ankehitriny dia mety hieritreritra ianao fa tena tsy azo tanterahana ny fianarana Shinoa, saingy araka ny voalazako tao amin'ny teny fanolorana, tsy izany no izy. Na izany aza, tahaka ny tranga hafa amin'ny asa maro, ny fanatontosana ny fametrahana dia maharitra ela. Raha te hanatona ny haavon'ny miteny miteny teratany ianao dia miresaka momba ny fanoloran-tena maharitra iray sy toe-javatra iainana izay ahafahanao miara-miasa amin'ny fiteny na miara-miasa aminy.
Nianatra ny Sinoa nandritra ny sivy taona aho ary mifandray amin'ny zavatra tsy fantatro isan'andro. Manantena aho fa tsy hijanona mihitsy izany toe-javatra izany. Mazava ho azy fa nianatra ilay fiteny tsara aho mba hahafahako mihaino, miteny, mamaky ary manoratra momba izay zavatra tiako, anisan'izany ireo sehatra manokana sy ara-teknika izay fantatro.
Saika ny mpianatra rehetra dia efa niorina tamin'ny lafin-javatra be dia be. Ary marina izany, angamba. Tsy mila mandany folo taona ianao na lasa mpianatra matihanina amin'ny fianaranao handoa. Na dia ny fandalinana volana vitsivitsy monja aza ary afaka milaza zavatra vitsivitsy amin'ny olona ao Shina amin'ny fiteniny manokana dia afaka manova ny fahasamihafana rehetra. Tsy misy ny fiteny; Tsy tonga tampoka izy ireo amin'ny fotoana iray. Eny, lasa mahasoa kokoa ny hahalalanao azy bebe kokoa, fa ny halaviranao dia alefanao. Azonao atao ihany koa ny mamaritra izay "fianarana mandarin". Raha ny tena manokana, heveriko ihany koa fa ny habetsaky ny zavatra tsy fantatro momba ny fiteny dia mahatonga ny fianarana ho mahaliana sy mahafinaritra!
Ianaro ny frantsay ho an'ny fahalalahana: Best Resources
Ny fahadisoana alemana nataon'ireo vao manomboka
Paska ('Pâques') any Frantsa
Ny fomba hanombohana ny fianarana Japoney
Top Movies momba an'i Italia
Fomba hanatsarana ny teny anglisy
Fianarana ho an'ny mpianatra ho an'ny mpampianatra
Ahoana ny fomba fanehoana ireo karazany alemà amin'ny ordinateranao
Ny History of Negritude: Ny Hetsika literatiora miteny frantsay
La Marseillaise Lyrics amin'ny teny Frantsay sy Anglisy
Mampiasa mozika alemà ao amin'ny efitrano alemà
Ilay tantara mahaliana sy ny tonon'ny 'The Noel Noel' amin'ny teny Frantsay
Teknikam-pako tsy mahazatra
Tantaran'ny rafitra Global Positioning - GPS
Fanarahan'ny Southern University
Aries ny Ram - Zodiac mirakitra
Mifanontona amin'ny Fikambanana Fitiavana na Grim Reaper
Cristie Kerr: Mpandresy nandritry ny LPGA Tour
Filohan-kevitra tsy mitongilana any Amerika Afovoany
'The Strain' Casting and Characters Main
Ireo mpilalao sarimihetsika mahomby indrindra ao amin'ny MMA
Ady amin'ny Touro College
Fitsipika momba ny Siansa Taona manaraka - Famolavolana Evolisiona
Figure Skating Costs and Training: Breaking Down By Skating Level
Lehilahy tsara indrindra amin'ny mozika an-tanandehibe
Loharanom-baovao ho an'ny fikarohana ara-sosialy
Inona ny Androgyne?
D Major Fitaratra amin'ny Bass
Fomba hitadiavana ny tady voavolavola eo amin'ny lisitry ny fehezan-teny